व्यवसायीको आकर्षण कांग्रेसमा, हेभीवेटदेखि उदीयमानसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि ! « GDP Nepal
१९ मंसिर २०७८, आइतबार । December 5, 2021
कार्पेट / बजार
व्यवसायीको आकर्षण कांग्रेसमा, हेभीवेटदेखि उदीयमानसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि !
९ मंसिर २०७८, बिहिबार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक उपस्थिति रहने देखिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका हेभिवेटदेखि उदीयमान व्यवसायीसम्म चयन भएका छन् ।
फोर्ब्सको अर्बपति सूचीमा सूचिकृत एकमात्र नेपाली उद्योगपति विनोद चौधरी नवलपुरबाट नेपाली कांग्रेस महाधिवेसन प्रतिनिधिमा सर्वसम्मत चयन भएका छन् । चौधरी महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी हुन भने आउँदो निर्वाचनमा टिकट पाए प्रत्यक्ष निर्वाचनसमेत लड्न मनस्थितिमा छन् ।
प्रभु समूहका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन बागलुङबाट निर्विरोध महाधिवेश प्रतिनिधि चयन भएका छन् । गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाटै समानुपातिक उम्मेदवार बनेका भट्टचन सांसद बन्न नसके पनि उनी कांग्रेसप्रति प्रतिवद्ध कार्यकर्ता मानिन्छन् । प्रभु बैंकका पूर्व सञ्चालक अम्बिका शर्मा पनि महाधिवेसन प्रतिनिधि चयन भएकी छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्यमा दोस्रोपटक निर्वाचित प्रकाशसिं कार्कीले सोलुखुम्बुबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याएर महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भए । पहिलो प्रदेश निर्वाचनमा कांग्रेसबाट प्रतिस्पर्धा गरेका कार्की फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् भने उनी आसन्न संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका बलियो दावेदार पनि हुन् ।
महासंघका प्रदेश १ उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्षमा निर्वाचित झापाका उद्यमी टीकाराज ढकाल झापा ३ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयन भएका छन् । ढकालका दाजुभाइ सबै महासंघ राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
सोलुखुम्बुबाटै नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष तथा एसियन ट्रेकिङका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पा दोस्रो लोकप्रिय मतसहित महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । पर्वतारोहण क्षेत्रमा सफल उद्यमी शेर्पा यस क्षेत्रका इन्साइक्लोपेडियासमेत मानिन्छन् ।
यता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्य किशोरकुमार आचार्य रोल्पा कांग्रेस सभापतिमा विजयी भएका छन् । महासंघ कार्यकारिणी सदस्य अमृत भट्टचन नवलपुर क्षेत्र नं. १ को क्षेत्रीय सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् ।
महासंघकै पूर्व कार्यकारिणी सदस्य केशवराज पाण्डे झापाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् भने जिल्ला उपसभापति पदमा पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । महासंघमा तीन कार्यकाल सदस्य रहेका पाण्डे यसअघि कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्यका समेत उम्मेवार थिए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष (वाणिज्य) अर्जुन पोख्रेल पनि कास्कीबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयन भएका छन् । उनी पोखराका लोकप्रिय उद्यमी समेत हुन् ।
निर्माण व्यवसायी कान्छाराम तामाङ रामेछाप कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएका छन् । एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाका सभापति स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
संघीय सांसदसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी जिपछिरिङ लामा दोलखाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् भने उनी केन्द्रीय सदस्यका प्रत्यासी समेत हुन् ।
यस्तै, महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योग वाणिज्य परिषद उपाध्यक्ष सुदर्शन कार्की दोलखाबाट प्रदेश महाधिवेसन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । योहो टिभीका सञ्चालक तथा निर्माण व्यवसायी आङकाजी शेर्पा पनि सोलुखुम्बुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी विमल ढकाल रुपन्देहीबाट तथा तिलक रानाभाट कास्कीबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।
व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईं यसअघि नै गोरखाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।
प्रकाशित : ९ मंसिर २०७८, बिहिबार
यामाहाले बेच्यो ३५ लाख पर्ने बोल्ट ८५० सिसी मोटरसाइकल !
तीन महिनामा १० अर्ब बराबरको चाँदी आयात
प्रतितोला ७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
नाडा निर्वाचनः कर्पोरेट हाउसबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ बन्दै !
उद्योग विभागमा रामचन्द्र तिवारी, सहसचिव भएको एक महिनामै महानिर्देशक
यस्तो बन्यो नाडा निर्वाचनमा ध्रुव थापाको प्यानल
खाद्य प्रविधिका पुडासैनी अब्बल, उद्योगका भुसाल दोस्रो: सचिवद्वय औषतमात्रै !
थप २०५ जनामा कोरोना संक्रमण, एकको मृत्यु
कालिकोटको पलाँतामा नबिल बैंकको दिगो बैंकिङ तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
लुम्बिनी विकास बैंकको एकै साथ पाँच शाखा उद्घाटन
साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा पहिरो, ७२ अंकले घट्यो नेप्से
इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर अवधि सकियो
सात वर्षदेखि जोरपाटी-साँखु सडक अलपत्र